Tamin’ny alalan’ny isa 3 no ho 0 no nandresen’ny Cnaps Sport ny ASJF Capricorne avy any Toliara. Isa 3 no ho 1 kosa no nadresen’nyJapan’ns Akademia Ny Akademia Ny Antsika tamin’ny lalao faharoa.
Mitarika teo amin’ny famonoam-baolina amin’izao Boto Fagnorena, izay mpilalaon’ny Japan Actuel’s, rehefa avya nahatafiditra baolina faha 14 ho azy izy nandritra ny fiahaonana nanoloana ny Akademia Ny Antsika. Ireto farany no nitarika ny isa tamin’ny alalan’ny Jimmy Simouri, saingy nosahalain’i Angelic ary nampian’i Boto sy Freddy hatramin’ny fiafaran’ny lalao. Nanao pao-droa kosa teo amin’ny lalao nihaonan’ny Cnaps sy ASJF Capricorne i Toussaint, izay mpilalaon’ny Japan taloha, niampy an’i Fidèle, izay lohalarahana mpisolo toerana voatery nitsangana noho ny fitsinjovana an’i Tigana.
Mbola manana andro roa hanarenana ny fahadisoany ireo ekipa roa (Akademia Ny Antsika sy ny ASJf Capricorne) resy omaly ireo. Amin’ny andro faharoa dia hihaona ny ASJF Capricorne sy ny Akademia. Ireo ekipa tafavoaka amin’ny Cnaps sy ny Japan ihany anefa no afaka manokatra lalana malalaka ho amin’ny fandrombahana ny amboara. Azo heverina ihany koa anefa ny ady sahala izay manova tanteraka ny vinavina eo amin’ireo mpijery baolina amin’ity lalao ity. Tsy hiantraika amin’ny dingana farany rahateo ny fitsipika nifehy ny fifaninanana tamin’ny fifanintsanana, izay tsy maintsy nametrahana ekipa mpandresy fa tsy nasiana « tir au but » tahaka ny tany aloha.